कोरोनासँग जुध्नुपर्ने बेला पार्टीका कार्यकर्ता कता हराए ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ २४, २०७७ बुधबार ८:२८:२५ | कृष्ण पोखरेल
त्योबेला जुन तयारी गर्नुपर्थ्याे, त्यो भएन । सरकार त्यहाँनिर पनि चुक्यो । अब रह्यो पार्टीको कुरा । नेकपाका आठ लाख कार्यकर्ता, कहाँ छन् ? त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षीका पनि कयौं लाख कार्यकर्ता कहाँ गए ?
सुरुमा लकडाउन गरेको बेला नै एकदमै आवश्यक किसिमले क्वरेण्टीन तथा आइसोलेशन बनाउने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण लिएर आउने, डाक्टरलाई कोरोनासँग लड्नको लागि विशेषज्ञ तालिम दिने, कोरोना जतिबेला पनि आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा सरकार बस्नुपर्थ्याे । तर सरकारले त्यस्तो केही पनि गरेको देखिएन ।
नागरिक कोरोनादेखि नडराउन् र नआत्तिउन् भन्नका लागि सरकारले कोरोना केही होइन भन्ने खालको मनोविज्ञान फैलाउनु ठीक थियो । कागजी बाघ र साँच्चिकै बाघ भनेजस्तै नागरिकको अगाडि यो रोग केही होइन भने पनि तयारी भने साँच्चिकै बाघ हो भन्ने खालको हुनुपर्थ्याे । पछाडि फर्केर हेर्दा अघिल्लो तीन महिनाको लकडाउन त्यतिकै खेर गएको जस्तो देखिन्छ । त्यतिबेलाको भन्दा लकडाउनको आवश्यकता अहिले बढी छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त त्यतिबेला आवश्यक नै थिएन ।
अस्पताल गएर उपचार गराउनुभन्दा अस्पताल नै जान नपर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्थ्याे । कमभन्दा कम मानिसलाई सङ्क्रमण होस भन्ने खालको तयारी गर्नुपर्ने थियो, मनोविज्ञान तयार गर्नुपर्ने थियो । यस्ता काममा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले जनचेतना फैलाउनको लागि माध्यमको काम गर्न सक्थे ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न संसारको सबैभन्दा बलियो देश अमेरिकाले त सकेको थिएन, नेपालले तुरुन्तै सकिहाल्छ भन्ने कुरो होइन । तर नागरिकको लागि संवेदनशील ढंगले सरकार अगाडि बढ्दैछ, सरकारका प्रयासका बाबजुद यो नसकिएको हो भन्ने मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ । कतिबेला त मानिस मरिसकेपछि कोरोना पुष्टि भएका घटनाहरु आए । अथवा भनौं कोरोना छ कि छैन भनेर जान्न मर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।
सत्तारुढ दल मात्र नभएर विपक्षीभित्र पनि यस्तै खिचातानी छ । कुनै कुनै पार्टीको लागि नागरिकमा आफ्नो इमेज बढाउने यो जस्तो राम्रो अवसर अरु केही हुन सक्दैन थियो । हरेक संकटले एउटा अवसर पनि लिएर आउँछ । पार्टीले नीति बनाएर नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्थ्यो । तपाईंले चुनेर सरकारमा पुर्याएकाहरुले के गरे ? भनेर सोध्न सक्थ्यो । नागरिकलाई हामी सही छौं भनेर आगामी चुनावको लागि बाटो बनाउन सक्थ्यो । दुःखको बेला त्यस्तै एउटा कार्यक्रम बनाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नागरिकको सेवामा पठाउन सक्थ्यो ।
​कतिपय अवस्थामा हाम्रो पद्धति प्रणाली र राज्य संयन्त्रमै भएको कमजोरीले पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न होला । तर यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, जस्तो २०४७ सालको संविधान असफल भयो । संविधानले म असलफल भएँ भनेर कहाँ भनेको छ ? यो त लेखिएको भाषा मात्रै हो । असफल त नेताहरु भएका हुन् ।
त्यस्तै अहिले हामी जुन राजनीतिक व्यवस्था लिएर आएका छौं, त्यो व्यवस्थामा यो खोट होइन । आखिर त के हो भने एकदमै सुपरसोनिक जेट चलाउन दियो भने पनि त्यो त पाइलटको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो नि । पाइलट दक्ष भयो भने त्यो जेट सजिलै उड्छ र सफल अवतरण हुन्छ । यदि पाइलट सक्षम छैन भने दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुरा के हो त ? जस्तो कर्मचारीतन्त्रकै कुरा गरौं, कर्मचारीतन्त्र भनेको आफै नीति बनाउने होइन, उसको कुनै छुट्टै भिजन हुँदैन । उसले त योग्य मानिसलाई चिन्न सक्नुपर्यो, चलाउन सक्नुपर्यो र उनीहरुबाट काम लिन सक्नुपर्यो ।
अहिले हामीले संविधान बदल्यौं, व्यवस्था बदल्यौं, हिजोको संविधानमा हुँदै नभएका नयाँ नयाँ मान्यताहरु लिएर आयौं । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लिएर आयौं । त्यसलाई चलाउने, स्थापित गर्ने भिजन त राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्यो । संघीयता आयो निजामति सेवामा काम गरेका कर्मचारीहरु प्रदेशमा, जिल्लामा जान चाहँदैनन् । उनीहरुलाई त्यहाँ काम गर्न पठाउने कसले हो त ? राजनीतिक नेतृत्वले हो नि । त्यसैले त्यो खालको निर्देशन दिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । प्रशासन भनेको रथ हो भने राजनीति नेतृत्व भनेको रथी हो ।
नागरिकको पीरमर्का समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न र महामारीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उपायहरुतर्फ अगाडि बढ्नुपर्यो । तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्यो ।
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)